Indlela yokulungisa isaladi nge inkukhu namakhowe
Ukudla nokuphuza, AmaSaladi
AmaSaladi sekuyisikhathi eside eseyidlo yendabuko yetafula lokugubha. Kodwa-ke, ngisho neresiphi enhle kunazo zonke neyintandokazi ngezimoto zesikhathi, ngakho ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuhlukanisa imenyu. Kuhle kakhulu kule saladi enenkukhu namakhowe, njengoba lezi zithako zihlanganiswa nenani elikhulu leminye imikhiqizo, futhi, ngokufanele, ungangena kumnandi.
Ake sihlale ezindleleni eziningi zokupheka ngokuningiliziwe. Isibonelo, isaladi lesikhukhu nama-mushroom "I-Ananas" ngeke ibe yiphunga elihle, kodwa futhi likhangayo, ngakho-ke, enye yeyokuqala izoba nesithakazelo kuzivakashi. Isifuba esisodwa senkukhu encane, ummbila wamakhowe asezinhlanzi, amaqanda amathathu, amazambane amaningana aphakathi nendawo, ummbila wezinhlamvu ezikhunjiwe, ama-gramu angama-200 wetizi ezigayiwe, i-bulb kanye nengilazi yama-walnuts ehlutshiwe kuyadingeka ukuze kulungiselelwe.
Ngaso leso sikhathi kuyadingeka ukuba wenze ukubhuka ukuthi ifomu lesidlo liyoba yisifuba, njenge-ananas, ngakho-ke igama. Bese silungiselela izithako. Izinkukhu, amaqanda namazambane ziphekwe (ngabanye), zibe yizicucu ezincane. I-bulb ihlanzwa futhi iqoshiwe. Izithako zibekwe ezigabeni. Okokuqala kuyoba amazambane. It is kancane usawoti futhi peppered, ugcobe nge imayonnaise. Kuyo ukwandisa anyanisi, uhhafu wenkukhu inyama, futhi wengeze usawoti omncane futhi umboze imayonnaise. Iphakathi kwesaladi kuyoba amakhowe asezinhlanzi, ahlelwe phansi ngemilenze. Zingasetshenziswa kokubili futhi ziqoshiwe. Ngokuqhubekayo kubeka ummbila, emva kwalokho inyama yenkukhu kanye noshizi ogayiwe, izingqimba zisakazwa nge imayonnaise. Isendlalelo esiphezulu sizoba amaqanda agayiwe, afakwa amantongomane. Ungasebenzisa ukuhlobisa anyanisi oluhlaza.
Enye iresiphi yokulungiselela isaladi egayiwe nge inkukhu namakhowe yi-Sunflower. Kuzodinga inkukhu ye-inkukhu, ama-300 amagremu wamakhowe amasha (kungcono ukuthatha ama-mushroom, kodwa amanye abuye ahle kakhulu), i-anyanisi, amaqanda amane enkukhu kanye namaqathi amabili aphakathi. Ukuze umhlobiso, ama-chips neminqumo ngaphandle kwembewu kuthathwa. Ngakho, ngaphambi kokuba ulungiselelwe, yenza izithako zilungele ukulungiselela. Ukwenza lokhu, upheke (ungaba ndawonye) inkukhu kanye izaqathe (ungakhohlwa ukuba usawoti ukuze unambitha). Amaqanda abilisiwe kanzima. Amakhowe anqunywa zibe izingcezu ezincane futhi ethosiwe epanini kanye no-anyanisi oqoshiwe. Uma uthatha amakhowe ngaphandle kwepishi yokudoba, qaphela ukuthatha amafutha amancane ngangokunokwenzeka, ngoba isaladi ngokwayo i-caloric.
Inkukhu ebilisiwe ihlelwa emafayilini, izaqathe namaqanda agcobe kwi-grater (amaprotheni nezikhupha ngokwehlukana). Okulandelayo, siqala ukulungisa ngokuqondile isaladi ngezinkukhu namakhowe. Izithako zibekwe ezigabeni, ezigcwala imayonnaise. Emayonnaise, ungafaka kuqala ama-shredded amakhambi kanye neziqephu ezimbalwa zikagalikhi, ngakho-ke isidlo sizoba nesinambitheka esikhulu.
Okokuqala faka inkukhu, khona-ke amakhowe anyanisi, izaqathe. Ingqimba yesine iyoba amaprotheni enkukhu, ahlukaniswe izikhumba ezihlukene, lezi zinsuku azikwazi ukugcwala imayonnaise, ngoba zizofana nombala we-sunflower. Ukuhlobisa ezinhlangothini kufakwe ama-chips ngendlela yamacembe, nasemithini yeminqumo eqoshiwe, njengembewu. Le isaladi enezinkukhu namakhowe kuyoba umhlobiso omuhle kakhulu wetafula lokugubha.
Futhi isiphuzo esiphundu futhi enhle kakhulu iyoba isaladi ngesibindi namakhowe. Kuye, ungathatha ubhontshisi obomvu ekheniwe, isibindi esibilisiwe (inkukhu inambitheka kakhulu), ethosiwe ngamakhowe anyanisi, amaqanda aqoshiwe. Zonke lezi izithako zixutshwe futhi zigqoke ngezimayonnaise. Ngaphambi kokukhonza, ungakwazi ukuhlobisa isitsha ngemifino.
Ngakho-ke, usebenzisa izithako ezifana nezinkukhu nama-mushroom kuma-saladi, uzoqinisekisa ukuthi yimpumelelo yesidlo esilungisiwe, njengoba le mikhiqizo ihlangene nayo yonke imifino naphakathi kwabo.
Isaladi "Izinyembezi Zabantu." Amaphikishi wezocansi ezinamandla
Isaladi «Isipho»: ukupheka zokupheka
Silungisa isaladi ngehhafu noshizi kanye ne-ananas. Iresiphi yesaladi "Ukuthambekela" nge ham
Isikhathi esifushane. Ukupheka nezindlela zokulungiselela.
Isaladi elula kusuka ku-щавля
Yini ukutshela sangaphandle Links Site
Yini nokuthi ukubona izimpumputhe umbala - ngaphandle umbala emhlabeni
Imbali Lilac e usizo engadini ukuze nginciphise ukucindezeleka ngokomzwelo
Lapho ikhula kwesihlahla enkulu kunazo zonke emhlabeni
"Imibala Afrika" Ezinhle Hook (master class isipho ukunitha inaliti embhedeni)
Indlela wotshani ngezandla zakho?
Indlela yokuthola indawo isikwele
Indlela ukukhetha Iphunga ngoba amadoda
Ibhethri phezu isithuthuthu: ukukhetha, izici